Qof ka hadal – IFIYE
Qof ka hadal8 Videos
Magaalada Qurduba ee carriga Andalus (Spain-ta maanta) ayaa nasiib u heshay in uu ku dhasho mid kamid ah caqliyadii ugu sareeyay ee caalamka soo mara; halyeey kasta iyo wakhtigiis, dabshidkii 1126-kii, qoys u badan culimmo iyo reer boqortooyo ayaa mar qura u dabbaal degay dhalashada wiilkooda, qof kale ma ahee waa Ibnu Rushdi (Averroes). Abuu […]
Qofba iyo waayihiisa, wakhtiga iyo fursaddiisa; dabshidkii 874-miilaaddiga, magaalada Faraab, ee hadda dhacda jiinka wabiga Seexoon, ee mara dalka Uzbekistan, waxaa ku dhashay wiil dunida ay xilligiisa u baahneyd, cabqarri ku suubbanaa waayihiisa iyo wadaad meel kaga soo jeestay dumiga culimma isku sheeggii waagaas shiicada u badnaa, kuwaas oo af duub iyo ashuun ku addimid […]
In badan oo Muslim ka kamid ah ayaa u dabaal dagaya maalinta dhalashada Nebiga CSW, taas oo culimmada jamhuurtooda ay isku waafaqsan yihiin in ay tahay 12-ka bisha Rabbiicul Awal. Dhowr iyo toban qarni ayaa kasoo wareegatay markii uu dunida kusoo biiray nabigii Alle, wiilkii madiga ahaa, agoonkii odawaaga ahaa iyo rasuulkii lagu soo abyay […]
“Illaahay baa mahad leh i baray islaamka ka hor inta aanan baran Muslimiinta ” Roger Garaudy (17 July 1913 – 13 June 2012),waana mid kamid ah hadalladii ugu wanaagsanaa ee laga qabto. Sannadkii 1996-kii ayuu qoray Garuady qoraalkiisii caanka baxay ee “Les Mythes fondateurs de la politique israelienne” ama ” Khuraafaadka siyaasadda Israa’iil” kaas oo […]
Waxa ay ahayd gabar madoow, xoog badan, caqliguna qanjaha joogo, waxa ay kasoo jeedday qoys dhaqan ahaan Soomaalida la mid ah, kala tagidda badan awgeed; nasiib uma helin in ay aabbaheeda iyo hooyadeeda wakhti fiican la qaadato sida aniga (Cabdi) oo kale. Dhowr jeer oo nolosheeda caruurnimada ayaa loo diga rogay meelo kala duwan oo […]